Dowalada Kenya oo sheegtay inaysan mustaqbalka ka qeyb qaadan doonin Hawlgalladda Nabad-ilaalinta Caalamiga.
Wasiirka Arrimaha Dibedda Kenya, Amina Mohamed ayaa hadalkaasi ku sheegtay Wareysi ay siisay Wargeyska The Star ee ka soo baxa Nairobi, waxayna si kulul u naqdisay Go’aankii ay QM xilka uga qaadeen Taliyihii Ciiddanka Nabad-ilaalinta QM ee joogta dalka Koonfurta Sudan, kaasi oo u dhashay Kenya.
Amina Mohamed oo ah Musharax xilka Guddoomiyaha Ururka Midowga Afrika “AU” ayaa sheegtay inay ka soo horjeedaan go’aanka xilka looga qaaday Jeneral Johnson Ondieki, waxayna intaasi ku dartay inay QM la xiriireen, balse aysan QM ka helin jawaab.
Jeneral Johnson Ondieki waxaa xilka Taliyaha Ciiddanka Nabad-ilaalinta QM ee Koonfuurta Suudaan loo magacaabay bishii June 17-da, iyadoo uu bishii July 8-dii qarxay Dagaalka Siyaasadeed ee u dhexeeyey Madaxweynaha iyo Ku-xigeenkiisa ee dalka Koonfurta Suudaan.
Dhinaca kale, Hadalka Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Kenya ku sheegtay inaysan mustaqbalka ka qeyb geli doonin Hawlgalladda Nabad-ilaalinta Caalamiga ayaa ku soo beegantay, iyadoo ay inta badan Hoggaamiyayaasha Mucaaradka dalkaasi ku baaqayaan in Ciiddanka Kenya laga soo wada saaro Hawlgalka ay u joogaan gudaha Somalia.